Akwụkwọ ndị akwadoro site n'aka ọtụtụ ndị ode akwụkwọ
Akwụkwọ kachasị mma nke ọtụtụ ndị edemede.
Akwụkwọ atọ kacha elu nke Hwang Sok Yong
Edemede na-agba ama na akụkọ intrahistoric kacha dị ụtọ na mmepe akụkọ ihe mere eme niile nke akara geopolitical vicissitudes nke ụbọchị ahụ gosipụtara. Korea nke taa dị ndụ kewara abụọ site n'ọrụ na amara nke agha oyi nke Germany siri na ya gbanarị na 89 mana nke na-ejigide ákwà mgbochi ya.
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Santiago Díaz
Ọgbọ m nke 70s nwere Santiago Díaz nke ọma. Maka na anyị gụnyere ndị ọzọ na -akọ akụkọ dịka Juan Gómez Jurado, Mikel Santiago, César Pérez Gellida na Paul Pen. Ha niile bụ ndị na -ede akwụkwọ enweghị obi abụọ. Thrillers dị ka nnukwu gwongworo. Na n'ụzọ ị ga -anụrị ha ụtọ ...
Akwụkwọ kacha mma nke Laetitia Colombani dere
Ị maara mgbe ị na -ekpebi "nke a ga -abụ abụ kacha amasị m"? Ọ dị mma, ụdị ihe a na -eme ma ị mechaa akwụkwọ nke Laetitia Colombani dere. Mgbe ahụ ka oge na -aga, akwụkwọ ọhụrụ na -atụkwa gị n'anya, dịka egwu ọhụrụ na -aghọ ụda ụda nke ndụ. Mana ajụjụ a bụ ka ịgụ akwụkwọ ma ọ bụ nyocha ...
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Eva Baltasar dere
Ntufe nke uri na prose na-ahapụ Eva Baltasar akara dị ka owuwe ihe ubi mmiri. Ụzọ nke jupụtara na ísì ụtọ nke ubi mkpụrụ osisi na ala. N'ime onye na-ede uri dị adị dị ka ya, isi ihe ga-emetụta ya na owuwe ihe ubi nke na-adọpụtakwa mgbọrọgwụ. Mgbọrọgwụ nwere ike ịbụ ...
Akwụkwọ 3 kacha elu nke Peter Carey
Ahịa mbipụta a na-atụghị anya ya na-echefu mgbe ụfọdụ ndị edemede dịka onye Australia Peter Carey. Ma ọ bụ ihe ihere n'ihi na n'ọrụ Carey, anyị na-ahụ otu onye edemede nke dịgasị iche n'etiti akụkọ ifo akụkọ ihe mere eme, uchronies, njem na ihe omimi nke na-abịara anyị na-eji ejiji ọkaibe. N'ihi na Carey na-eme ihe ...
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Esther García Llovet
Satire nwere ike ịbụ ụdị ọchị kachasị acidic. Ọhụụ lysergic nke na-akpalite ọchị nke na-efegharị n'ọdachi nke omume ụgha, nke folds mmadụ. Mgbe ọhụụ satirical na-enweghị obi ebere na-awakpo ọha mmadụ, ọdịdị na-efe efe na ikuku, na usoro ha iji mee ka onwe ha dịgide na…
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Daniel Saldaña
The obi ike, nyocha na ọtọ nke mkpụrụ obi na-eme ka avant-garde akwụkwọ mgbe niile. Ihe Daniel Saldaña na-ekwusa n'ụzọ dị mfe nke onye kwenyesiri ike na ozi ya n'ụwa a. Na ọ bụ naanị onye ode akwụkwọ kwenyesiri ike nwere ike mechaa rute ụzọ ọhụrụ nke iwepụta asụsụ.
Akwụkwọ kacha mma Alice Feeney
N'ịbụ onye e mere baptizim dị ka onye edemede nke ọgụgụ isi, onye edemede Bekee Alice Feeney enwetala nkwado nke ndị na-agụ akwụkwọ na-enyo enyo si gburugburu ụwa. Ruo n'iji ya atụnyere Shari Lapena. Mgbe ahụ, ọ nwere ike deflate ka ukwuu ma ọ bụ dị nta dị ka mere na Paula Hawkins. Mana…
Peeji1 Peeji2 ... Peeji161 Ọzọ →